Tontolo Arabo: “Tsy miteny hoe Israely intsony izahay…” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Janoary 2021 4:30 GMT
(Lahatsoratra nivoaka tamin'ny volana Janoary 2009)
Tsy misy farany ny resabe momba ny ady ao Gaza. Nanjary lasa fampitandremana ho an'ireo tompon'andraikitra Israeliana ambony tsy handeha tany Eoropa noho ny tahotra sao hisy ny fitsarana ady heloka bevava ny fitakiana ny fanenjehana ireo tompon'andraikitra Israeliana sy ireo manamboninahitra noho ny heloka bevava tamin'ny ady. Ny hafa kosa mbola nilaza ihany fa fiarovan-tena no zava-nitranga nandritra ny herisetra nataon'ny Israeliana. Ny vondrom-piarahamonina an-tserasera Arabo, kivy sy sosotra noho ny habibiana nitranga sy ny fifandiran'ny fampitam-baovao izay mbola mitohy an-tserasera sy ivelan'ny Aterineto dia nanao fanentanana izay natombok'ity sioka manaraka ity (hafatra tao amin'ny sehatra famahanam-bilaogy madinika twitter):
Manazava ny hevitra ao ambadiky ny fanentanana hampiasa ny teny hoe Israhell i Alloush [ar] avy any Syria:
Milaza ny zava-misy fa nanao heloka bevava mampivarahontsana sy fihetsika mahatsiravina indrindra i Isiraely tamin'ny fibodoana ny tany Arabo, ary tena nampihozongozona ny mari-panondroana anay Arabo izany. Milaza ny zava-misy fa Israhell io fa tsy Israely. Inona no fandikan-teny tsara indrindra amin'ity teny vaovao ity? Tokony hiteny ve isika hoe Israhell (Israel+Hell na afobe) sa Isravil (Israel+Evil na devoly) ? Angamba ny Fikambanan'ny Afobe no dikanteny tsara indrindra ho amin'izany.
Avy amin'ilay tranonkalan'ny zavakanto malaza DeviantArt nataon'ilay mpamorona modely Alzeriana Hamoud ny sarin'ny fanentanana .
Nahasarika fanehoankevitra marobe avy amin'ny olona amin'ny ankolafy roa ilay sary modely. Ilay mpisera tao amin'ny DeviantArt ~Arkangel-Wulf niaro ny ankolafy Israeliana nilaza hoe:
Manana ny eritreritrao sy ny hevitrao ianao. Saingy tsy toerana natao hampielezana ireo hevitra ireo eto. Tsara ny fahalalahana maneho hevitra rehefa tsy mandratra ny hafa. Tsy ny Isiraely rehetra no ao ambadiky ny fanapaha-kevitr'ireo miaramila. Aza maniratsira ny firenena iray manontolo noho ny fihetsiky ny olom-bitsy.
Nisy hetsika iray hafa ihany koa hita an-tserasera – Rakipahalalana momba ny Fanimbazimbana ny maha-olombelona nataon'i Israely [ar / en] – izay ezaka fiaraha-miasa teo amin'ny bilaogera Syriana, Egyptiana ary Saodiana nandrakitra ny fahombiazan'ny fanentanana:
40.000 teo no vokatry ny fikarohana ny teny IsraHell 6 andro lasa izay
102.00 teo ho eo 2 andro lasa izay
117.000 izany ankehitriny
Tamin'ny 15 Janoary 2009 no nanoratana ny lahatsoratra. Nahitana vokatra fikarohana miisa 127 000 tamin'ny fotoana nanoratana ity lahatsoratra ity.
Raha naato ny fanafihan'ny tafika dia tsy mbola misy mahalala hoe hafiriana ny faharetan'ny fampiatoana ny fifandonana sy ny hoe rahoviana indray no hanomboka ny afobe.